उत्सवलाई निरस बनाउने त्यो दिन फागुन १ ले बल्झाउने एक विभत्स हत्या
नेपाल लाइभ बिहीबार, फागुन १, २०७६, ०७:२७
उत्सव रसाइली युट्युब च्यानल चलाउँछन्, ‘रमाइलो छ’। सधैँ हाँस्दै, मुस्कुराउँदै कलाकारको अन्तर्वार्ता लिन्छन्, अनि दोहोर्‍याइ तेहेर्‍याइ भनिरहन्छन्- ‘रमाइलो छ’।
तर, धेरैलाई थाहा छैन- उनको यो हाँसो र रमाइलोभित्र एउटा दर्दनाक कथा छ। हरेक वर्ष आउने फागुन १ ले जीवनको त्यो कहालीलाग्दो घटना सम्झाउँछ।
सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको यो दिनलाई उत्सवका रुपमा मनाउनेहरू पनि छन्। तर, उत्सव र उनको परिवारलाई यो दिन क्यालेन्डरको पानाबाट अलप भइदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। किनभने यो दिनले उनी र उनको परिवारको पुरिँदै गएको गहिरो चोटको घाउ बल्झाएर जान्छ।
०६० साल फागुन १ गते नै हो, उनको परिवारको खुसी खोसिएको। यही मितिमा त हो- सेनाले उनको दिदीलाई बलात्कारपछि गोली हानेर मारेको।
त्यही द्वन्द्वले राज्यव्यवस्था त परिवर्तन गर्‍यो। हिजो युद्ध लड्नेहरूलाई आज सत्तामा पनि पुर्‍यायो। तर कतिको यसैले लगाएको घाउ अझै खाटा बस्न सकेको छैन। द्वन्द्वप्रभावित परिवारले पीडा भुल्न सकेका छैनन्।
‘मलाई थाहा छ, दुःख छ, पीडा छ भन्दैमा मान्छेले सधैँ त्यसैलाई सम्झिएरै बस्नु त हुन्न तर निर्दोष दिदीलाई त्यसरी मारेको त जति बिर्सन खोजे पनि नसकिने रहेछ। साँच्चै गाह्रो हुँदो रहेछ,’ घटना सम्झिँदा आज पनि उत्सवका आँखाबाट आँसु थामिदैनन्।
सशस्त्र द्वन्द्वको आगो दन्किरहेको समयको घटना हो। त्यो दिन तत्कालीन माओवादीले काभ्रेपलान्चोकको पोखरीचौरस्थित रैकरटोलमा जनयुद्ध दिवस मनाउन पूरै गाउँ सिंगारेको थियो।
साँझ झिलिमिली देखेर त्यतिबेला पाँच कक्षा पढिरहेका १२ वर्षीय उत्सव खुबै रमाएका थिए। उनका माइला दाइ सुरेन्द्र रसाइली माओवादीका लडाकु थिए, प्रहरीसँगको भिडन्तमा परेर सहिद भएका थिए।
त्यसपछि बदलाको भावनाले अर्का दाइ र दिदी पनि क्रमशः माओवादीमा लागेका थिए। त्यसैले घरमा उत्सवसँगै भाइ उद्धव, दिदी रीना, आमा, बुबा र हजुरआमा मात्रै हुन्थे।
अवस्था डरमर्दो थियो। उनको घरमा गस्तीमा हिँडिरहने सेनाको कडा निगरानी थियो। त्यसैले रात पर्नासाथ उनका बुबा र दिदी घर बस्दैनथे, अन्तै सुत्न जान्थे।
तर, त्यो दिन उत्सवकी फुपु दिदी देवी सुनार र अर्का भिनाजु आएका थिए। त्यसैले बुवा बाहिर गएनन्। सबै घरमै बसिरहेका थिए। परिवारमा खुसीको माहोल छाएको थियो।
उत्सवको घरमा टिभी थिएन। अलि पर छिमेकीकहाँ जानुपर्थ्यो। टिभीमा शुक्रबार आउने लोकदोहाेरी कार्यक्रम उनी नछुटाइ हेर्थे। त्यसदिन पनि टिभी हेर्न भनेर भाइ उद्धव र उनी त्यतै गएका थिए।
दुवै टिभी हेर्दाहेर्द त्यहीँ निदाएछन्। भोलिपल्ट बिहान साढे ६ बजे घर पुग्दा ढोका फोडिएको अवस्थामा देखे। मनमनै ठाने- ला...बाघ आएर ढोका फोडेछ कि क्या हो!
त्यसपछि माथि कोठामा जाँदा जताततै मौनता छाएको थियो। हजुरआमा रामराम जपिरहेकी थिइन्। ममी बेहोस् थिइन्। बुबा र फुपु दिदीका आँखा रसाइरहेका थिए।
कोही केही बोलिरहेको थिएन।
त्यसपछि घर पछाडि गएर हेर्दा थाहा भयो- दिदीलाई मारिएछ। उत्तिसको रुखमा बाँधिएको अवस्थामा थियो दिदीको शव। शरीरको लुगा च्यातिएको मात्रै थिएन, यौनांगबाट रगत पनि बगिरहेको थियो। र, पछाडिबाट हानेको गोली छातीबाट निस्किएको प्रष्टै देखिन्थ्यो।
‘सायद पहिलोपल्ट दिदीको शव नजिकबाट नियाल्ने म नै थिएँ,’ उत्सव घटना सम्झिन्छन्, ‘शव हेर्न नसकेर देवी दिदीले तन्नाले छोपिदिएकी थिइन्। म त बच्चै थिएँ। म त न केही गर्न सक्थें, न केही बोल्न। बस् एक टकले टोलाएर हेरिरहेँ।’
पछि बुझ्दै जाँदा थाहा भयो- रातको ११ बजेतिर सेनाको टोली घर आएछ। ढोका ढकढक्याएछ। भ्यालबाट चिहाएर हेर्दा सेना आएको थाहा पाएपछि कसैले ढोका खोलेनन्।
त्यसपछि सेना ढोका फोडेर भित्र पस्यो। रीना दिदी र भिनाजुलाई नियन्त्रणमा लियो। रातभर केरकार गर्‍यो। झन् रीनालाई त खुब ‘टर्चर’ दियो। घरी आँगनमा लगेर, घरी गोठमा।
ममी, बुबा र फुपु दिदीको कानमा उनको चित्कार प्रष्टै सुनिन्थ्यो तर कोही केही गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्।
रातभर दुर्व्यवहार गरेपछि सेनाको टोली रीनालाई ‘सुइकाउने’ निचोडमा पुग्यो। उनको परिवारले यो सब चाल पायो। तैपनि पुर्पुरोमा हात राखेर रुनुबाहेक कसैसँग केही विकल्प भएन।
यतिमात्रै होइन, सेनाले छोरीलाई मार्न बुबासँगै डोरी मागेछन्। बुबाले चुपचाप दिएछन्। त्यसपछि गोली हानियो। शव रुखमा बाँधियो। र, यसरी १७ वर्षको कलिलो उमेरमा उनको ज्यान लिइयो। सँगै नियन्त्रणमा परेका भिनाजुलाई भने सेनाले केरकारपछि छोडिदियो।
‘आफ्नो छोरीलाई मार्न आफ्नै हातले डोरी दिनुपर्दा त्यतिबेला बुबाको मनमा के बित्यो होला, आज पनि उहाँलाई के लाग्दो हो,’ यो जिज्ञासा सुनाइरहँदा उत्सवको स्वर झन्झन् मलिन भइरहेको थियो।
त्यसपछि गाउँतिर हल्ला भयो। छरछिमेक आउन थाले। तर, घरमा कोही पनि होसमा थिएनन्। सबै बाँचेर पनि मरिरहेजस्तो! ममी पूरै बेहोस् थिइन्। उनका ड्याडी होसमा त थिए तर केही गर्न सकिरहेका थिएनन्। बुढी हजुरआमाले केही गर्ने कुरै भएन।
उत्सव सानैदेखि प्रायः घरको काममा दिदीसँग जुटिरहेका हुन्थे। सरसफाइ गर्ने, पाहुनालाई चिया पकाएर दिने, सबै काम गर्थे उनी। त्यसैले त्यस दिन पनि उनी रुन छाडेर परिवारको हेरचाहतिर लागे।
यता निर्दोषलाई मारियो भनेर शव नउठाउने कुरा भयो। दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै शव जस्ताको तस्तै राखियो, नउठाइकन।
‘शव त्यसरी राखेको पाँचौ दिन राती स्यालले दिदीको एकातिरको तिघ्रै खाइदिएछ,’ आफूलाई सम्हाल्दै उत्सव सुनाइरहेका थिए, ‘त्यो देखेर मनै रोयो। झन् ममी ड्याडीलाई के भयो होला। आज सम्झिँदा चिच्याएर रुन मन लाग्छ।’
छैटौं दिन काठमाडौंबाट पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी गएर रिपोर्टिङ गरेपछि मात्र उनको दिदीको अन्त्येष्टि गरिएको थियो ।
उत्सवको परिवारमा आमा सुन्तलीको कोखबाट उनीसहित जम्मा ११ सन्तान जन्मिएका थिए। तीनजना उत्सव नजन्मिँदै सानैमा बिते। बाँकी थिए, ८ जना।
उनका बुबा कर्णबहादुर सुरुदेखि नै कम्युनिस्ट विचारधाराका। बुबाकै प्रभावले होला माइला दाइ सुरेन्द्र माओवादीमा लागेका थिए।
त्यसैले रीनाको हत्याअघि उत्सवको परिवारले युद्धका कारण एउटा छोरा गुमाइसकेको थियो। सशस्त्र द्वन्दका बेला माओवादीले काभ्रे, भकुन्डेबेसीमा रहेको प्रहरी चौकी कब्जा गर्ने क्रममा एक जनामात्रै माओवादीको मृत्यु भएको थियो। ती थिए, उत्सवका दाइ- सुरेन्द्र।
सुरेन्द्रको मृत्युपछि नै उत्सवको परिवारमा चोट परेको थियो। खासगरी उनकी आमा निकै दुःखी थिइन्।
त्यसैले सुरेन्द्रकै घटनापछि उनको परिवारमा बदलाको भावना जाग्यो। साइँला दाइ र कान्छी दिदी पनि माओवादीमा लागिन्। यद्यपि रीना युद्धको समर्थनमा थिइनन्। उल्टै दिदीहरुलाई त्यसो नगर्नु भनेर सम्झाउँथिन्।
सोझी थिइन्। पढाइमा पनि ठिकठिकै थिइन्। ७ कक्षामा पढ्थिन्।
दलित परिवारमा जन्मिए पनि उत्सवको घरका कसैलाई स्कुल जान रोकतोक थिएन। परिवारका सदस्य माओवादीमा लागेर पनि होला, खासै विभेदको सामना गर्नुपरेन। ब्राह्मण, क्षेत्री साथीभाइसँग सँगै खेल्ने, सँगै गाइबस्तु चराउन जान्थे। भलै साथीहरु उनको घरमा पकाएको खाना खान्थेनन्।
मादल बजाउन जान्ने थियो उनको परिवार। त्यसैले पनि उनको परिवारलाई सबैले खोज्थे। बुबा आरनको काम गर्थे। धेरै बारी भएको दलित परिवारमा पर्थ्यो उनको घर।
यसरी हाँसीखुसी चलिरहेको उनको परिवार सशस्त्र द्वन्द्वपछि उजाडिँदै गयो। दाइको मृत्युले दुःखी भएकी उनकी आमा झन् रीनाको आँखैअगाडि निर्मम हत्या भएपछि त मानसिक समस्याबाटै गुज्रिइन्। र, आजसम्म पनि उनी द्वन्द्वले निम्ताएको त्यो समस्या सामना गरिरहेकी छिन्– दिनहुँ मानसिक रोगको औषधि सेवन गरेर।
रीना प्रौढ शिक्षा पनि पढाउँथिइन्। घरको काममा उत्सवसँग उनको खुब सहकार्य हुन्थ्यो। कोही दाइ र दिदी माओवादीमा, कोही घरजम गरेर श्रीमान्‍को घरमा। घरमा बाँकी थिए नै उनी, रीना र भाइ।
त्यसैले उत्सव दिदीसँग मिलेर काम गर्थे। मेलापातमा सँगै हुन्थे। दिदीसँग कोदो रोप्न जान्थे। घरमा दिदीले पोत्दा उनी लिप्ने काम गर्थे। बाख्रा सार्नेदेखि भाडा माझ्ने सबै काममा दिदीलाई सघाउँथे।
रीनाको हत्या भएको साँझ उनले बोलेको एउटा संवाद आज पनि उत्सवको कानमा गुन्जिरहन्छ। पानी लिनका लागि उनीहरु सधैँ उकाली चढेर पहिरो भन्ने ठाउँमा पुग्थे। ठमठम हिड्ने मान्छेलाई पनि त्यस्तै १५ मिनेट लाग्थ्यो।
स्कुलबाट फर्किएपछि त्यस साँझ पनि उत्सव दिदीसँग पानी लिन गएका थिए। दिदीलाई पखाला लागेको थियो। गाग्रीमा पानी भरेपछि थकाइ मार्दैमार्दै उनीहरु फर्किएका थिए। फर्किने क्रममा दिदीले उनलाई आफ्नो हात देखाउँदै भनेको उत्सवले भुलेका छैनन्, ‘हेर त, मेरो हात कति पहेँलो भएछ है, रगत नभएर होला।’
रीनाको हत्या उत्सवको परिवारमा ठूलै बज्रपातझै भयो। सेनाको डरले काठमाडौंमा भएका उनका दाजुभाउजु उनको शव हेर्नसम्म आउन सकेनन्।
दिन, महिना, हप्तामात्रै होइन धेरै वर्षसम्म उनको घर सुनसान भयो। घटनालगत्तै उनको ममी मानसिक रोगबाट ग्रसित भइन्। जतिखेर पनि युद्धले गुमाएका छोरा–छोरी सम्झिन थालिन्। त्यसैले उनलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले काठमाडौं लगेर सेल्टरमा राख्यो। करिब एक वर्ष नै।
घटनापछि उत्सव र उनका भाइ गाउँमा केही दिन त स्कुल गए तर निरन्तरता दिन सकेनन्। दाइ र दिदी दुवै मारिएको परिवार भनेर धेरैले उनीहरुलाई ‘बिचरा’को दृष्टिले हेर्थे। अरुको प्रेममा उनलाई त्यो भाव प्रष्टै महसुस हुन्थ्यो।
घटनाको पाँच महिनापछि उनीहरुलाई काठमाडौं ल्याइयो। ममी ड्याडीले बचेका दुइ छोराहरुलाई राम्रो शिक्षादिक्षा दिलाइदिन संघसंस्था गुहारे।
त्यसपछि सिविन नेपालसँग कुरा गरेर उनीहरुलाई काठमाडौं ल्याइयो। सिविनकै होस्टेलमा राखेर कालिमाटीको जनप्रभात माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गराइयो, कक्षा ६ देखि १० सम्म त्यही पढाइयो। त्यसपछि उनले सोल्टिमोडको एभरेष्ट कलेजबाट प्लस टु सकाए। ब्याचलर भने प्रदर्शनीमार्गस्थित आरआर कलेजबाट गरे।
घटनाको आज १६ वर्ष बितिसक्यो। तर, यो १६ वर्ष कटाउन उत्सवको परिवारलाई पक्कै सहज भएन। धेरै उतारचढावहरुको सामना गर्नुपर्‍यो।
घटनापछिको ७–८ वर्ष त निकै कष्टकर भयो। एक वर्षपछि उनको ममी–ड्याडी काठमाडौंबाट गाउँ त फर्किए तर बस्न सकेनन्। हजुरआमाको निधनपछि त झन् गाह्रो भयो।
त्यसपछि त ममी–ड्याडी पनि काठमाडौं नै आए। हरियाली छाउने उनको घर सुख्खा हुन थाल्यो। बारीहरु बाझै भए। आँगनमा झार उम्रिन थाल्यो। लिपेको रातमाटोको डोब पनि हराउन थाल्यो। र, दिदीलाई गुमाएको त्यो घरमा उत्सवलाई जान मन लाग्नै छाड्यो। सायद परिवारका अरुलाई पनि त्यस्तै भयो।
‘दिदीको हत्यापछि त परिवारमा पुरै बज्रपात आएजस्तो भयो,’ उत्सव सुनाउँछन्, ‘काठमाडौं आएर बस्न थालेपछि बुबाको आरनको काम पनि रोक्कियो। ममीसँग मानसिक रोगको औषधी खाने पैसासम्म अभाव भयो। औषधीकै लागि उहाँ संघसंस्था धाउनुभयो। द्वन्द्वका बेला त परिवारका एक सदस्य अर्कोसँग भेट्न डराउनुपर्‍यो। खासमा भन्नुपर्दा हाम्रो परिवारले त बाँच्नकै लागि ठूलो संघर्ष गर्नुपर्‍यो।’
आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नै काखमै राखेर पढाउने रहर कुनचाहिँ आमाबुबालाई हुँदैन र? उत्सवलाई लाग्छ, उनको आमाबुबाले त्यो रहर चाहेर पनि पूरा गर्न सक्नुभएन।
काठमाडौं आएपछि आफन्तको शरणमा पर्नुपर्ने अवस्था आयो। उनका बुबा जीवन धान्न काँधमा मकै बेच्दै डुल्न थाले। ५ र १० रुपैयाँ हिसाब गर्दै जीन्दगी चल्न थाल्यो। ‘कहिलेकाँही ड्याडीसँगै ममी पनि मकै बेच्न सँगै हिँड्नुहुन्थ्यो, द्वन्द्वले सिर्जना गरेको यो दृश्य सम्झदा आज पनि भक्कानो फुटेर आउँछ,’ उत्सव भन्छन्।
अहिले पनि ममीको औषधिका लागि मासिक करिब १५–२० हजार खर्च हुन्छ। उनको ड्याडी पनि प्रेसरको औषधि खाइरहेका छन्। युट्युबको आम्दानीले अहिले पछिल्ला केही वर्ष उनलाई घर चलाउन सहज भइरहेको छ। नत्र धेरै गाह्रो थियो।
कसैले झुक्किएर दिदी, दाइको कुरा निकालिहाल्यो भने उनको ममी भक्कानो फुट्ने गरि रुन थालिहाल्छिन्। दिदी र दाइको सम्झनामा हरेक दिन उनको तस्बिरमा धुपबत्ति बाल्छिन्। चाडपर्वमा सधैँ उनीहरुलाई सम्झिएर रुन्छिन्।
तर, उनले आफ्नो ड्याडीले भने कहिल्यै ममी जसरी रोएको देखेनन्। ‘ड्याडीको त पूरा जिन्दगी ममीलाई सम्हाल्न, ममीलाई बचाउनमै समर्पित भयो, अरुको अगाडि नरोए पनि एक्लै त धेरै रुनुभयो होलाजस्तो लाग्छ,’ उनी भावुक हुँदै बोले।
भूकम्पले पुरानो घर भत्काएपछि अहिले उत्सवको परिवार गाउँतिरै नयाँ घर बनाइरहेको छ।
देशमा सशस्त्र द्धन्द चर्किरहेका बेला, सेनाले आफ्नो दिदीको विभत्स हत्या गरेका बेला उत्सव बच्चै थिए।
दिदीको घटना हुनुअघिसम्म त उनका घरमा माओवादीहरु आउँथे। खसी काटेर भोज पनि हुन्थ्यो। र, त्यो माहोल उनलाई रमाइलै लाग्थ्यो।
जब दाइ प्रहरी आक्रमणका क्रममा मारिनुभयो त्यसपछि पनि दाइका साथीहरु घर आएका थिए। त्यतिबेला ममी बेस्सरी रोएको उत्सवको मस्तिष्कमा अझै झलझली सम्झना छ।
दिदीको विभत्स हत्यापछि त उत्सवको बालमस्तिष्कमा पनि बदलाको भावना जागिसकेको थियो।
‘काठमाडौं आएपछि सुरुसुरुमा आर्मी पुलिस देख्दा पनि एकदमै रिस उठ्थ्यो, डर लाग्थ्यो,’ उनले सम्झिए, ‘बदलाको भावना जाग्थ्यो। यिनीहरु मान्छे मार्न नै जन्मिएको हुन् भन्ने लाग्थ्यो। तर, पछि अलि बुझ्ने भएपछि थाहा भयो, सरकार र द्वन्द्व पक्षबीच कसले कसलाई बढी क्षति पुर्‍याउने प्रतिस्पर्धा हुँदा हाम्रो परिवारले यस्तो नतिजा भोगेको रहेछ।’
जब सिविनको होस्टेलमा रहँदा माओवादीबाट मारिएका प्रहरीका सन्तानका दर्दनाक कथा सुन्न थाले, त्यसपछिचाहिँ उनले मन बुझाए– युद्धमा यस्तो हुने रहेछ।
उत्सवले बुझ्न थाले– युद्धका बेला दुवैले दुवै पक्षलाई दोषी देख्ने रहेछ। र, सबैभन्दा बढी पीडा आफन्तलाई हुने रहेछ।
उनलाइ लाग्यो–हारजीतको खेलमा हाम्रो परिवारले बढी मूल्य चुकाउनुपर्‍यो।
होस्टेलमा एक्लै हुँदा दिदी सम्झेर उनी धेरैपल्ट रोएका छन्। जबजब रक्षा बन्धन आउँछ, भाइटीका आउँछ, उनलाई रीना दिदीको याद आउँछ। उनीमाथि भएको अत्याचारको दृश्य उनको मस्तिष्कको पर्दामा झलझली देखिन थाल्छ।
होस्टेलमा रहँदा सबै उनलाई द्वन्द्व प्रभावित बालबालिका भनेर बोलाउँथे। उनलाई लाग्थ्यो– ला..., हामी त कति पीडा भोगेको मान्छे, दुःखी मान्छे रहेछौँ।
उनी कक्षा ८मा पढ्दै गर्दा एन्टेना फाउन्डेसनले द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्यले रेडियो कार्यत्रम ल्याएको थियो– ‘सुनौँ, बोलौँ’। सिविनका तर्फबाट उनले कार्यक्रम सञ्चालनको अवसर पाएका थिए। कक्षा १२ मा पढ्दासम्म उनले यो कार्यक्रमका लागि काम गरे।
कार्यक्रमका लागि काम गर्ने क्रममा धेरै द्वन्द्व प्रभावित बालबालिका भेट्नुपर्थ्यो। द्वन्द्वका कारण कसैले बुबा, कसैले आमा, कसैले श्रीमान्, कसैले श्रीमती गुमाएका दर्दनाक कथा सुन्नुपर्थ्यो।
यसले पनि उत्सवलाई बलियो बनाएको थियो। द्वन्द्वको प्रभावमा परेको ममात्रै होइन रहेछ, अरु पनि रहेछन् भन्ने महसुस गराएको थियो। जिन्दगीमा पीडा बिर्सिएर अघि बढ्नुको विकल्प रहेनछ भन्ने भावना जगाएको थियो।
तर, आज पनि कतै कसैमाथि हत्या र बलात्कार भएको खबर सुन्दा उत्सव रीना दिदी सम्झिहाल्छन्। अनि मनमनै सोच्छन्, उसको परिवारलाई अहिले कति ठूलो पीडा भएको होला, त्यहाँ के बितिरहेको होला। निर्मला पन्त बलात्कारको घटनाले पनि उनलाई आफ्नो दिदी सम्झाएको थियो।
‘रीना दिदी आज बाँच्नुभएको भए सायद उहाँको बिहे भइसकेको हुन्थ्यो, भाञ्जाभाञ्जी भइसकेका हुन्थ्यो, कति खुसी हुन्थ्यो होला है हाम्रो परिवार,’ उत्सव कहिलेकाहिँ यस्तै कल्पनामा रमाउँछन्। तर, यथार्थमा यस्तो सम्भव छैन।
धेरैले सुनेको हुनुपर्छ– मैना सुनुवार हत्या काण्ड। रीनाको हत्या भएको घटनाको साक्षी अर्थात् उत्सवको फुपु दिदीकी छोरी देवीकी छोरी थिइन्, मैना।
जब देवीले रीनाको घटनाबारे खुलेर बोलिरहेकी थिइन्, हत्यारालाई सजायको माग गरिरहेकी थिइन् । त्यहीबेला उनकी छोरी मैना बेपत्ता पारिइन्।
दुई वर्षपछि थाहा भयो– पाँचखालको सैनिक ब्यारेकमा बन्दी बनाएर सेनाले उनको हत्या गरेछन्। घटनाको दोषी ठहराउँदै काभ्रे जिल्ला अदालतले साढे दुई वर्षअघि तीन पूर्व सैनिक अधिकृतलाई २० वर्षको कैद फैसला सुनाइ पनि सक्यो।
तर, रीनाको परिवारले अझै न्याए पाएको छैन्। उत्सवकी दिदी गीता अहिले द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्षसमेत छिन्। निर्दोष दिदीले न्याय पाउने आश अझै उनको घरमा मरिसकेको छैन।
उत्सवका अनुसार घटनालगत्तै रीनाको न्यायका लागि घरमा लड्ने मान्छे कोही थिएन्। ड्याडी ममीलाई सम्हाल्नुपर्ने अवस्थामा थिए।
तैपनि उनका बुबाले छोरीलाई सुरक्षाकर्मीले बलात्कार गरी हत्या गरेको भन्दै ९ नम्बर बाहिनी भकुन्डेका उपसेनानीसहितलाई कारबाहीको माग गरी २०६३ जेठ ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
तर, दोषीलाई कारबाही भएन। ‘मलाई त आश छैन तर मेरो ममीलाई अझै आशा छ जस्तो लाग्छ,’ उत्सव भन्दै थिए, ‘तर, त्यतिबेला सत्ताका लागि लडेका मान्छेहरु आज सत्तामा छन्, त्यतिबेला न्यायका लागि लडेकाहरु आज आफैं न्यायालयमा छन्, अब कोसँग न्याय माग्ने? यो त उनीहरुले आफैँ बुझेर दिनुपर्ने होइन र?’
कसैले भनेका थिए– प्रेम र युद्धमा सबै कुरा जायज हुन्छन्। तर, उत्सवको परिवारको कथा सुन्दा लाग्छ, द्वन्द्वमा आफन्त गुमाउनेलाई यो सब जायज ठान्न कहाँ मन लाग्छ र!
सईदेखि आइजीसम्मको तलब काटेर कोनोरा कोषमा
साउदीमा ३ जना कोरोना संक्रमित नेपाली निको भए
नेपाललाई धन्यवाद भन्दै घर फर्किए जर्मन, विमानस्थलमा छचल्कियो खुशी [४ तस्बिर]
भाइरसले विकास गरेको भाइचारा : अमेरिकामा अपरिचित पनि भन्छन्, 'के सहयोग गर्न सक्छु?' अमेरिकी समाजअनुसार कठोर बन्दै गइरहेको डा श्रेष्ठको मन पत्र पढ्दै गर्दा पग्लिन थाल्यो। अनपेक्षित प्राप्त त्यो पत्रले एकाएक भावुक बनाए... बुधबार, चैत २६, २०७६
सईदेखि आइजीसम्मको तलब काटेर कोनोरा कोषमा बुधबार, चैत २६, २०७६
साउदीमा ३ जना कोरोना संक्रमित नेपाली निको भए बुधबार, चैत २६, २०७६
कोरोना भाइरसको तथ्यांक लुकाएको आरोप किन लाग्छ चीनलाई? बुधबार, चैत २६, २०७६
नेपाललाई धन्यवाद भन्दै घर फर्किए जर्मन, विमानस्थलमा छचल्कियो खुशी [४ तस्बिर] बुधबार, चैत २६, २०७६